G.W. Bush oo markii ugu horraysay siyaab leh usheegay in duullaankii Ciraaq uu ahaa mid gardarra ah.
Thursday May 19, 2022 - 17:27:03
Kadib 20 sanadood oo dowladda Mareykanka ay fasiraad khalad ah ka bixinaysay duullaankii gardarrada ahaa ee ay ku qaadday dalka Ciraaq ayuu markii ugu horraysay ictiraaf rasmi ah ka bixiyay madaxweynihii mas'uulka ahaa duullaankii wadankaas lagu qaaday.
G.W Bush madaxweynihii hore ee xukuumadda Washington ayaa si lama filaan ah uga yaabsaday malaayiin qof american ah kadib markii uu goob fagaare ah ka sheegay in duullaankii ay ciidamadiisu ku qaadeen Ciraaq uu ahaa mid gardarro bahalnimo ah.
Isagoo kalimad ka jeedinayay mid kamida jaamacadaha waaweyn ee dalka Mareykanka laguna marti qaaday ayuu doonay in uu madaxweynaha Ruushka Faladamiir Putin ku dhaleeeeyo kuna ceebeeyo duullaanka uu ku qaaday dalka Yukreyn balse khalad carrabkiisa ka dhacay ayuu isagu is duqeeyay.
Buush ayaa si kedis ah u sheegay in duullaankii Ciraaq uu ahaa mid uu go'aamiyay hal nin uuna yahay duullaank gardarro ah, dadkii goobta ku sugnaa ayaa mar qura afka gacanta saartay iyagoo la amakaagsan waxa kasoo yeeray madaxweynahoodii hore balse Bush oo madaxa ruxayay ayaa caddeymihiisa fakadka ah sabab uga dhigay carrabkiisa oo ambaday sabab laxiriirta isagoo ah gaboow 75 sana jir ah, markii uu Bush khaladkiisa usababeeyay duqnimadiisa ayay qosol afka jabsadeen dadkii american-ka ahaa ee madasha ku sugnaa
Soomaalidu waxay tiraahdaa wixii uurka ku jira afka ayaa soo dafa, hadaba warbaahinta mareykanka ayaa arrinkan siyaabo kala duwan uga falcelisay iyadoona saxafiyiintu ay aad ugu diganayeen.
Markii uu hadalka Bush ku faafay baraha bulshada ayuu wariye katirsan telefeshinka Dallaas News ku sifeeyay ictiraaf dilaa ah.
Fox news oo kamid warbaahinta ugu caansan USA ayaa ciwaan ka dhigatay waa zallo aad looga xumaado halka wargeyska HUFFINGTON POST uu yiri waa Zallo lawaqtiyeeyay oo halis ah.
Saxifadda Washington Examiner ayaa hadalka sida khaladka ah ugasoo yeeray bush ku sifaysay mid banaanka soo dhigaya khasaaraha dagaalkii Ciraaq.
Dad badan oo baraha bulsahdaa qoraallo ku faafiyay ayaa hadalka Bush aan ka dhigin khalad balse ku tilmaamay ictiraafkii ugu dambeeyay.
Mahdi Xasan oo ah saxafi ayaa bartiisa twitterka ku qoray in tani tahay qirasho weyn oo saameynaysa dhammaan ehellada askarta American-ka ah ee lagu dilay dagaalkii Ciraaq.
Ciidamada Faransiiska oo ka baxay saldhig ay ku lahaayeen bartamaha dalka Maali.